Zvinokosha Zvakadini IpaIndaneti Kugadzirwa KweInjini Rankings? - Semalt Expert Anonetseka
Kune chero bhizinesi rekuInternet, kuwana kuenderera mberi kwevatengi muIndaneti ndiro pfungwa huru yekusika kwewebsite. Nokutsvaga kutsvaga Engine Optimization (SEO), musimboti unogona kuchengetedza kuvapo kwakasimba uye kunooneka paIndaneti. Chiratidzo chinogona kusvika kune vanhu vakawanda sezvo kambani inosvika kune vamwe vatengi vakawanda. Somugumisiro, mawebsite akawanda anotarirwa pakurongedza zvakakwirira pavanotsvaga injini dzemamwe mazwi anokosha anongotarisana niche yavo. Kubudirira kwebasa iri kunogoneka kuburikidza neSEO. Inosanganisira zvinhu zvakadai sezvinokosha mazwi kutsvaga, backlinking uye social media viral marketing.
Kubva munaJanuary 2017, SEO yakachinja zvishoma nezvishoma. Nemuenzaniso, kunze kwemashoko makuru, Google ikozvino inonyanya kukoshesa zvakagadzikana, zvakasununguka zvemhando dzekugadzirwa, zvakakosha zvehupenyu uye web design zvinhu zvakare. Kuti mumwe aite sERP algorithm kuti aite, vanofanirwa kutarisa chete pane zvichishandisa mushumiri panguva yechirongwa chekutsvaga. Iko kunzwisisika kwekunzwa uye kufungidzirwa kwomunhu pavanosarudza chibvumirano chako kunobata chisarudzo chavo pamusoro pekutenga panzvimbo yako yepaiti kana kuenda kune imwe mhinduro yekutsvaga. Nokudaro, kuita webhusaiti inotevera zvakanaka web design zvinhu ndeye inofanirwa kuva nekutengesa kweInternet.
Kuti mumwe awane zvikwereti zvakanaka, Mutengi weKuchengetedza Muteereri we Semalt , Services Digital, Alexander Peresunko, anorumbidza zvikamu zvinotevera:
Chigadzirwa chekambani chewebsite
Webhusaiti inofanirwa kuve yakanyatsobudirira pakukodha kwayo nekugadzirisa. Nzvimbo yakanaka haifaniri kuva nehutachiona uye bhugs..Kubatanidzwa kwepakati kunofanirwa kuva nechikwata chinokwana chakakwana chekuteerera nekukurumidza. MunaJanuary gore rino, Google inoda kuti mawebhusayithi ave neshamwari dzeserura kwavari kuti vakwanise mumapeji eSERP.
SEO ndeyekugadzira chakasimba chekuvapo kwechiratidzo. Google inopa zvikwereti zvakakosha kuburikidza nehuwandu. Izwi rinokosha kusarudza uye tsanangudzo yehupenyu hwako rinonyatsomirira nzvimbo iyo peji ichachengetwa muSERPs. Chinhu chipi nechipi chaunotumira chinomirira mararamiro auri kuedza kuita kuti utachiona.
Chinhu chekugadzira webhusaiti ndechimwe chinangwa chekugadzirwa kwewebhu. Google inopa chinangwa chomunhu kuburikidza nezvinhu zvakadaro. Munhu anofanira kunyengerwa paanoshanyira nzvimbo yako. Zvinhu zvinoonekwa zvinowedzera kutendeuka nokushandura vashanyi kuva vatengi. Iyo yakagadzirirwa inofanira kupa muenzi wako nguva yakaoma nekuvatungamirira kuburikidza nekutenga kana kubhadhara.
Maitiro aunoita sei uye mabhii akakosha akadai seChete-To-Action mabasa anowedzera zvikuru kutengesa kwaunoita. Kunaka kwekufamba kunokosha kunobatsira kuti vatengi vanowana sei zvavari kutsvaga. Mutengi haafaniri kunge akaoma kana kutarisana nematambudziko kana achifamba.
Kufanana nebhizimisi, kuburitsa kwewebhu kunokwanisa kuchinja maitiro akawanda ekudhinda ma digital sezvakaitwa SEO. Maitiro ekutsvaga mushanyi anonzwa mune webhusaiti yako ane simba guru kana kuti ivo vangatenga kana kuti kwete, pamwe chete nemichina yekutsvaga injini, tsanangura mapeji ewebhu. Nokuda kweiyo yakakosha mazwi, kushamwaridzana kwemafoni, pamwe nekuita kwewebsite, ndizvo zvipi Google inopa uremu kana zvasvika pakuisa webhusaiti. Somugumisiro, zvakakosha kune chero muzvinabhizimisi anoda kutungamira munharaunda yeInternet kuti afunge nezvekambani yehutaneti hwehutano hwekutsvaga. Nzvimbo dzakanaka dzine mikana yepamusoro yepamusoro uye pamwe nekukwikwidzana mune niches dzavo Source .